Nhau - Ungasarudza sei slurry pombi?
Sei kusarudza slurry pombi?
Pakubata slurries, vashandisi kazhinji vanofanirwa kusarudza pakati pebhurugwa-rakarongedzwa kana simbi kuvakwa kwavo slurry pombi Ichi chinyorwa chinopa zvimwe zvekutengeserana-kuregedza nemipimo ine chekuita nekushandiswa kweimwe yeaya maviri slurry pombi dhizaini. Tafura 1 pakupera kwechinyorwa chino inopa kupfupisa kuenzanisa kwezvose zvigadzirwa.
Slurry imvura ine zvakamiswa zvakaomarara. Iko hasha kweslurry kunoenderana neyakaomeswa yevasungwa, kuomarara, chimiro, uye iyo solid particle kinetic simba inoendeswa kupombi nzvimbo. Slurries anogona kukuvadza uye / kana viscous. Solids inogona kusanganisa faindi yemidziyo kana hombe zvinhu zvakaomarara zvinowanzo kuve zvisina kujairika chimiro uye nekuparadzirwa.
Kusarudza iyo nguva yekushandisa iyo slurry maitiro centrifugal pombi inogona kunge iri sarudzo yakaoma. Kazhinji mutengo wepombi inotsvedza yakawanda zvakapetwa iyo yepombi yemvura yakajairwa uye izvi zvinogona kuita kuti sarudzo yekushandisa pombi yeslurry ive yakaoma zvikuru. Rimwe dambudziko mukusarudza pombi mhando ndeyekutarisa kuti kana iyo mvura inozopombwa iri slurry here. Tinogona kutsanangura slurry semvura ipi neipi ine zvinyowani zvakawanda kupfuura zvemvura yekunwa. Zvino, izvi hazvireve kuti pombi yeslurry inofanira kushandiswa pane ese mashandisirwo aine huwandu hwesimbi, asi ingori pombi yeslurry inofanirwa kutariswa.
Slurry kupompa mune yayo yakapusa fomu inogona kuganhurwa muzvikamu zvitatu: iyo mwenje, yepakati uye inorema slurry. Kazhinji, light slurries ndiwo slurries ayo asina kuitirwa kutakura zvakasimba. Kuvapo kwezvinhu zvakasimba kunoitika zvakanyanya netsaona kupfuura dhizaini. Kune rimwe divi, zvinorema slurries ndiwo slurries akagadzirirwa kutakura zvinhu kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe. Kazhinji kacho kutakura fluid mune inorema slurry ingori huipi hwakakosha mukubatsira kutakura izvo zvaunoda. Iyo yepakati slurry ndeye iyo inowira kumwe kunhu pakati. Kazhinji, iyo Percent solid mune yepakati slurry inotanga kubva pa5% kusvika 20% nekurema.
Mushure mekugadziriswa kwakaitwa kwekuti kana uri kubata nehuremu, hwepakati, kana hwakareruka slurry, ndiyo nguva yekufananidza pombi nekushandisa. Pazasi pane runyorwa ruzhinji rweakasiyana maitiro echiedza, epakati, uye anorema slurry.
Chiedza Slurry Hunhu:
● Kuvapo kwezvinhu zvakasimba kunowanzoitika netsaona
● Saizi Yakakura <200 microns
● Kusagadzirisa slurry
● Iyo slurry chaiyo giravhiti <1.05
● Asingasviki mashanu% solids nekuyera
Svikiro Slurry Unhu:
● Saizi yakakura 200 microns kusvika 1/4 inch (6.4mm)
● Kugadzika kana kusapedza slurry
● Iyo slurry yakatarwa giravhiti <1.15
● 5% kusvika 20% solids nekurema
Heavy Slurry Hunhu:
● Chinangwa chikuru cheSlurry ndechekutakura zvinhu
● Zvakasimba> 1/4 inch (6.4mm)
● Iyo slurry yakatarwa giravhiti> 1.15
● Yakakura kudarika makumi maviri muzana solids nekurema
Chinyorwa chekare ruchiva gwara rinokurumidza kubatsira kupatsanura dzakasiyana pombi kunyorera. Zvimwe zvekufunga zvinoda kugadziriswa pakusarudza pombi modhi ndeizvi:
● Hasha kuomarara
● Particle chimiro
● Kukura kweparticle
● Particle velocity uye nzira
● Particle arambe achirema
● Particle kupinza
Vagadziri vemapombi eslurry vakatora zvese zvinhu zvataurwa pamusoro uye vakagadzira mapombi ekupa mushandisi wekupedzisira hupenyu hwakatarisirwa. Nehurombo, kune zvimwe zvinokanganiswa zvinoitwa kuitira kuti upe hunogamuchirwa hupenyu hwepombi. Iyi inotevera tafura ipfupi inoratidza dhizaini dhizaini, kubatsirwa, uye kukanganisa kweiyo slurry pombi.